Atụmatụ na usoro maka Olee iji nweta iCloud ndabere faịlụ
"Hi, otú ahụ ka m na nso nso nwetara iCloud na kwadoo m iPhone. M nwere ike ịhụ na a data kwadoo ma ike ịnweta a data si m pc. Dị ụzọ ọ bụla iji nweta m iCloud ndabere si a PC?-Ekele unu!" - Nancy
Dị ka Nancy, chọrọ ịhụ ihe bụ na gị na iCloud? OK, M na-ekweta na ọ bụ ntakịrị ike zaa gị ajụjụ na 2 ma ọ bụ 3 obere ahịrịokwu, n'ihi na e nwere ọtụtụ ndị na-aza. Na ụfọdụ n'ime ha nwere ike ghara ịbụ onye ị chọrọ maka. Agbanyeghị, amasị m ịkọrọ ụzọ niile na gị, na-enwe olileanya na m ga-aza gị ajụjụ n'ụzọ zuru ezu:
Ngwọta 1: Access iCloud faịlụ na PC gị na site mmeghe iCloud ukara saịtị (View akụkụ nke data)
Ngwọta 2: Access iCloud ndabere faịlụ site na Iweghachi gị iOS ngwaọrụ (nzuzu, akpa ọchị)
Ngwọta 3: Access iCloud ndabere faịlụ na Wondershare Dr.Fone maka iOS (ụzọ kasị mma)
Atụmatụ 1: Olee ebe m bụ iCloud ndabere faịlụ?
Atụmatụ 2: Olee otú iji Hichapụ iCloud ndabere faịlụ
Nanị ụzọ Apple-enye gị ohere iji lelee ihe bụ na gị na iCloud na-egbu osisi iCloud ukara saịtị. Otú ọ dị, mgbe na-egbu osisi, ị ga-ahụ na i nwere ike na ego akụkụ nke data, gụnyere: kọntaktị, mail, kalenda, na ndetu, ncheta, peeji nke, Ọnụ Ọgụgụ na keynote akwụkwọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na mkpa iji lelee n'elu kwuru banyere data na iCloud, ọ bụ ezughị. Dị ka ndị ọzọ na faịlụ na ntọala, ka foto, mgbidi akwụkwọ, dere videos, ngwa, ederede ozi, MMS ozi, iMessage, ụdaolu, visual ozi olu ozi olu, na ndị ọzọ, Apple adịghị ekwe ka ị ka ịnweta ha na iCloud. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji nweta ihe faịlụ na iCloud faịlụ, ị kwesịrị ị na lelee ngwọta 3 nke na-agwa esi nweta iCloud ndabere faịlụ, atụtụ data gị mkpa.
Nzọụkwụ 1. Open iCloud ukara saịtị na a nchọgharị na kọmputa gị;
Nzọụkwụ 2. abanye na na gị iCloud akaụntụ ma ọ bụ Apple ID na ego data on iCloud
M maara, ọ na-ada nzuzu iji nweta iCloud ndabere faịlụ site na Iweghachi gị iOS ngwaọrụ. Otú ọ dị, ị ga-ekweta na ọ bụ a ụzọ, nri?
Nzọụkwụ 1. pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala.
Nzọụkwụ 2. Dị ka melite kpaliri, họrọ Weghachi si iCloud ndabere> banye na iCloud akaụntụ> ahọrọ a ndabere faịlụ iji weghachi.
Mkpa: tupu Iweghachi gị iOS ngwaọrụ na iCloud ndabere faịlụ, ị ga-ndabere nke ugbu a data na gị iOS n'ihi na ihe niile data na gị iOS ngwaọrụ ga-ehichapu na jupụtara ochie data si iCloud ndabere faịlụ.
Ngwọta 3: Access iCloud ndabere faịlụ na Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (ụzọ kasị mma)
Maka nche, Apple mgbe na-agwa gị ebe gị iCloud ndabere faịlụ bụ. Ọ bụrụ na ị mkpa iji nweta iCloud ndabere faịlụ, ị kwesịrị ị na-agbalị a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ ma ọ bụ chọọ ụzọ ebe gị iCloud ndabere faịlụ bụ. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ị na-ahụ gị iCloud ndabere faịlụ, n'ozuzu, ị pụghị-ele data na iCloud ndabere faịlụ na nkọwa. Ọ bụ a ngwugwu na niile data agwakọta ọnụ, na-egosipụta dị ka koodu. Luckily, Wondershare Dr.Fone maka iOS uche-enye gị ohere ahụ ihe niile iCloud ndabere faịlụ na wepụ data si iCloud ndabere. Lee otú ọ na-arụ ọrụ.
The World Mbụ iOS Data Recovery Software n'ihi na ị na Access Data na iCloud ndabere faịlụ
Download data si iCloud ndabere faịlụ selectively;
Ụdị data na iCloud ndabere faịlụ n'ime edemede;
Ekwe ka ndị ọrụ na-azọpụta data si iCloud ndabere faịlụ ka kọmputa
Ofụri Esịt dakọtara na multiple iPhones, iPads na iPod aka ụdị;
Nzọụkwụ 1 Wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị
Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị nwere Mac, na-agbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac). Ọ bụrụ na ị na-eji a Windows PC, wụnye Wondershare Dr.fone maka iOS (Windows). Mgbe ị wụnye ya, malite ya ozugbo.
Nzọụkwụ 2 iṅomi Text Ozi na iPhone
Pịa Malite iṅomi ka Dr.Fone maka iOS Doppler data na gị iPhone. N'oge usoro, ị pụrụ ịhụ data niile, gụnyere ederede ozi, na-egosipụta na-ekpe sidebar. Biko na-gị iPhone ejikọrọ na kọmputa gị oge niile.
Nzọụkwụ 3 Bipute ozi ederede site na iPhone
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu ozi niile otu otu. Tinye akà rà na ihe ịchọrọ na-azọpụta ya na kọmputa gị dị ka ihe HTML faịlụ. Nke a pụrụ ịbụ ụzọ kasị mma na-odide ndị e si iPhone 5 ka PC ibipụta. Ederede ozi, gụnyere ehichapụ ozi ederede gị iPhone nwere ike ịhụ na e biri ebi si.
NDỤMỌDỤ 1: Olee ebe m bụ iCloud ndabere faịlụ?
Ndo na-agwa gị na Apple adịghị awa ụzọ ebe gị iCloud ndabere faịlụ a zoputara. N'ezie, ọ bụ ihe na ígwé ojii, na Apple si nkesa. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji nweta iCloud ndabere faịlụ, ị kwesịrị ị na-etinye otu n'ime ụzọ ziri ezi n'elu.
NDỤMỌDỤ 2: Olee otú iji Hichapụ iCloud ndabere faịlụ
iCloud ndabere faịlụ na-ukwuu ohere. Ọ bụrụ na ị na-eji iCloud ruo ogologo oge, mgbe ahụ, n'ihi na n'aka, ị kwesịrị ị ihichapụ ụfọdụ ochie iCloud ndabere faịlụ, ma ị ga-akwụ maka mmezi nchekwa. Soro nzọụkwụ, ị nwere ike ihichapụ ochie iCloud ndabere faịlụ na gị ọ bụla nke gị iOS ngwaọrụ.
Pịa Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere> swipe iCloud ndabere ka NA> mgbata Jikwaa Nchekwa na otu window. Enweta na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na ị chọrọ iji wepụ iCloud> enweta Hichapụ ndabere.
> Resource> iCloud> Olee iji nweta iCloud ndabere File na Olee otú iji Lee Gịnị bụ ihe na iCloud